QALBI AYUU LEEYAHAY: Zlatan Ibrahimovic Oo Ilmada Ceshan Waayey Isagoo Warbaahinta La Hadlaya | Laacibnet.net
HomeSerie AQALBI AYUU LEEYAHAY: Zlatan Ibrahimovic Oo Ilmada Ceshan Waayey Isagoo Warbaahinta La Hadlaya
QALBI AYUU LEEYAHAY: Zlatan Ibrahimovic Oo Ilmada Ceshan Waayey Isagoo Warbaahinta La Hadlaya
Xiddiga reer Sweden Zlatan Ibrahimovic oo lagu yaqaano nin ad-adag oo aan jixin-jixin inta uu garoonka ku jiro, ayaa ilmada ceshan kari waayey isagoo warbaahinta la hadlaya oo si toos ah shaashadaha looga daawanayo, kaddib markii uu xasuustay farriin uu ka helay wiilkiisa.
Laacibkan afka hore uga ciyaara AC Milan oo xilli ciyaareedkan dhaliyey 17 gool 23 ciyaarood oo uu u saftay AC Milan, ayaa dib loogu yeedhay xulka qaranka waddankiisa Sweden oo uu ka maqnaa muddo afar sannadood ah.
Zlatan Ibrahimovic oo ah xiddiga ugu goolasha badan waddankiisa Sweden, ayaa ciyaaraha caalamiga ah ka fadhiistay markii uu dalkiisu ka hadhay tartanka Euro 2016, waxaana uu ka maqnaa Koobkii Adduunka 2018 oo tababare Janne Andersson aanu kusoo darin liiska xiddigaha xulka qaranka.
Laakiin Ibrahimovic ayaa hadda dib loogu soo celiyey xulka Sweden iyadoo uu ka qayb-galyo kulamada isreeb-reebka Koobka Adduunka 2022.
Si kastaba, Zlatan Ibrahimovic oo warbaahinta la hadlay ayaa qalbi-jileeciisa bannaanka keenay markii la weydiiyey sida carruurtiisu ay uga falceliyeen markii uu dib ugu soo noqday xulka qarankiisa.
Laba wiil oo uu dhalay Zlatan Ibrahimovic oo lagu kala magacaabo Maximilian iyo Vincent oo 14 jir iyo 12 jir kala ah, ayaa oohin miciinsaday markii ay magaca aabbahood ku arkeen liiska xulka qaranka Sweden oo dib loogu soo celiyey.
Ibra oo la weydiiyey dareenka carruurtiisa ayaa oohin qabsaday, waxaana markiiba kasoo daadatay ilmo isagoo xasuusanaya sidii uu ahaa dareenka wiilashiisa ee markii uu ka fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah.
“Vincent wuu ooyey markii aan ka tegay.” Ayuu yidhi Zlatan Ibrahimovic oo ilmaynaya.
Intaa kaddib waxa uu Zlatan Ibrahimovic ka sheekeeyey sida uu ugu soo laabtay u ciyaarista qarankiisa, waxaanu yidhi: “In aad u ciyaarto xulka qaranka, waa shayga ugu weyn ee aad gaadhi karto ciyaartoy ahaan, aniga oo la socday (xaaladda Sweden), waxa aan dareemay in aan caawin karayo iyaga oo aan wax qaban karayo.”
Xulka qaranka Sweden ayaa ciyaari doona laba kulan oo isreeb-reebka Koobka Adduunka 2022 ah, waxaanay Khamiista garoonka Friends Arena ku martigelin doonaan xulka qaranka Georgia, waxaana ugu xigi doona Kosovo.